कसरी बन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ? – Everest Dainik – News from Nepal
कसरी बन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?
पछिल्लो समयमा धेरैलाई पित्तथैलीमा हुने पत्थरीले सताउन थालेको छ । अत्यधिक मोटोपन, मधुमेह, शरीरको तौल धेरै घट्नु, निरन्तर खाली पेट बस्नु, रक्तअल्पता, गर्भनिरोधक चक्कीको बढी सेवनजस्ता कारणले पित्तथैलीमा पत्थरी हुन्छ । सामान्यतः पित्तथैलीको पत्थरीका बिरामीहरूमा कुनै लक्षण देखिँदैन । अरू कुनै कारणले पेटको भिडियो एक्सरे गर्दा पित्तथैलीको पत्थरी देखिन सक्छ । यसरी पत्थरी भएको फेलापर्नेहरूमध्ये करिब २० प्रतिशत मानिसमा मात्र लक्षण देखिने गरेको पाइन्छ । पित्तथैलीमा पत्थरी हुँदा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे कन्सल्ट्यान्ट तथा ग्यास्ट्रो सर्जन डा.राकेशकुमार साह यसो भन्छन्–
ट्याग्स: gallbladder stony